Antivirus dimy izay hanampy amin'ny fiarovana tsara kokoa ny terminal anao | Androidsis
Taona vitsivitsy lasa izay, antivirus amin'ny Android tsy nanan-danja loatra izy io ankehitriny, indrindra noho ny lazan'ny rafi-piasan'ny finday Google.
Ohatrinona arakaraka ny itiavan'ny rafitra iray dia ny viriosy na malware marobe no hiseho eoFitsipika mahazatra eto amin'ity tontolon'ny haitao sy informatika ity, ary vao mainka aza izany rehefa manana angona manokana manan-danja amin'ny finday avo lenta sy takelaka misy olona an-tapitrisany maro manerantany. Izahay dia manome anao tolo-kevitra mahaliana dimy ho antivirus maimaim-poana izay azonao sintonina avy amin'ny Play Store.
Na dia tsy ratsy aza ny fianaranao ny fomba esory virus Android, nisafidy dimy amin'ireo antivirus tsara indrindra azonao jerena ao amin'ny Play Store izahay avy amin'ny lisitra fampitahana natao tamin'ny taon-dasa tamin'ny laboratoara fitiliana tsy miankina Av-Fitsapana, izay fantatro raha oharina amin'ny vokatra Android 30 isan-karazany. Ny santionan'ny malware rehetra notarafina tamin'ny 1972, izay nahitana fampiharana 7 100% raha 16 kosa nahita 98%.
1 Mobile Security & Antivirus avy amin'i Avast
3 Lookout Mobile Antivirus & Security
4 Antivirus sy fiarovana McAfee
5 BitDefender Antivirus maimaim-poana
Mobile Security & Antivirus avy amin'i Avast
Miatrika ny iray amin'ireo rindranasa izahay fantatry ny mpankafy PC indrindra ary hitany fa ny tranokalany amin'ny Android dia iray amin'ireo serivisy maimaimpoana tsara indrindra azonao apetraka amin'ny findainao.
Ny fampiharana dia manana interface tsara amin'ny mpampiasa mahafinaritra ary miaraka amina endri-javatra manan-danja toy ny antivirus sy antimalware mahazatra, ao anatin'izany ny rafitra fanoherana ny halatra izay hahafaly ny maro. Fitaovana hafa dia ny fanaraha-maso ny tamba-jotra, ny sivana SMS ary ny sivana antso, manana rafitra hanaovana backup.
Ny kinova maimaimpoana manana izay rehetra azo takiana amin'ny fampiharana an'ity karazana ity, raha toa ka afaka manome anao backups mozika, horonan-tsary ary rindranasa, miaraka amin'ny zavatra maro hafa, ny kinova aloa.
Fampiharana iray hafa izay avy amin'ny PC sy izay malaza amin'ny fanomezana serivisy manan-danja hahitana viriosy sy malware ary izay ambonin'io dia maimaim-poana.
Ao amin'ny AVG Antivirus no hanananao fiasa fiarovana malware mahazatra ary antivirus ary koa iray ho an'ny tranonkala, antitheft mampiasa Google Maps, mpitantana ny fizotrany ary monitor iray hanampy anao hifehezana ny fiainana bateria.
Con mpampiasa mihoatra ny 100 tapitrisa izay nametraka AVG tao amin'ny tobiny dia tsy isalasalana fa antoka lehibe.
AVG Antivirus sy Security ho an'ny Android
Lookout Mobile Antivirus & Security
Miatrika fampiharana izany izahay Izy io dia iray amin'ireo voalohany niseho tamin'ny Android hanolotra anay fitaovana matanjaka manohitra ny malware. Talohan'ny nahatongavan'ilay McAfee na AVG malaza tany Android dia efa niady ny serivisy Lookout Mobile.
Serivisy manana ny ilaina rehetra hiarovana ny telefaoninao, manampy ny mety hahitana ny telefaona raha misy ny fatiantoka, ny hidin-trano sy ny famafana ny fahatsiarovana avy lavitra, ny mpitantana ny fampiharana ary na ny firewall ho an'ireo telefaona izay manana tombontsoa ROOT aza.
Misy koa a kinova aloa izay manolotra ankoatry ny zavatra manakana fampiharana na fikarohana doka.
Antivirus sy fiarovana McAfee
Iray amin'ireo malaza indrindra koa izay avy amin'ny PC sy izany maro aminareo no ho afaka nanandrana amin'ny solosainao birao.
Ao amin'ny kinova voaloa handray soa ianao amin'ny fanampiana an-telefaona, kopia nomaniny ho solon'izay ary ho hadinonao ny momba ny dokam-barotra amin'ny fampiharana. Ho an'ny ambiny, manana ny fiasa fototra izy io toy ny mety hisakanana ny fampiharana, ny antso ary ny sivana SMS.
Toy ilay voalaza etsy ambony, manana rafitra fanoherana ny halatra izy, izay miavaka «CaptureCam», izay manolotra ny Safidy haka sary ny olona fa nangalatra ilay fitaovana ianao, handefasana ny toeran'ny terminal amin'ny mailaka.
Tsara ny manasongadina ny fiarovana amin'ny mailaka sy tranonkala ary ny fiasa toa ny mamafa data maloto sy ny hidin'ny terminal hampidirina amin'ny rafitra fanoherana ny halatra.
Fiarovana amin'ny finday: Wi-Fi azo antoka miaraka amin'ny VPN sy ny fanoherana ny halatra
BitDefender Antivirus maimaim-poana
Ny farany amin'ireo antivirus dimy maimaim-poana dia BitDefender ary maimaim-poana tanteraka. Misongadina noho izany ity serivisy ity Izany dia noho ny fahatsorana izay ambarany amin'ny asany tsirairay avy ary noho ny lanjany kely izay eritreretiny ho an'ny rafitra.
Tsy hahita lisitra lava an'ny fampiasa toy ny rafitra fanoherana ny halatra isika, fa ny zavatra ataony dia mandeha tsara. Fampiharana izay manao scanner haingana ary ny asany dia izao fotsiny. Izy io koa dia manana ny fankatoavana avy amin'ny solosaina birao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Ilay antivirus maimaim-poana 5 tsara indrindra ho an'ny Android